hoy ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, omaly. Niaraka nihazakazaka sy nanao fanatanjahantena izahay, hoy izy. Fotoana mahafinaritra ahy manokana satria natao tao anatin'ny firahalahiana izany. Amin'izao fiantombohan'ny taona izao dia nametraka hafatra aho ho an'ny manamboninahitry ny tafika Malagasy rehetra manerana ny Nosy amin'ny ny maha-zava dehibe ny fampisehoana firaisan-kina sy ny fenetren-tena eo anivon'ny tafika. Izy ireo mantsy no tandroka aron'ny vozona sy kitro ifaharan’ny fiandrianam-pirenena. Miaro ny firenena sy ny vahoaka Malagasy, mitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana, noho izany. Izy ireo no tokony ho maodely sy fitaratra amin'ny fitondran-tena, ny fahitsiana, ny fandavan-tena ary ny fanompoana tanindrazana . Nanainga azy ireo aho ny hitandro lalandava ny hasin’ny andraikitra sy ny adidy masina nankinin’ny firenena tamin'izy ireo, hoy hatrany ny tenany. Tetsy ankilany dia niteraka resabe ny fanamian’ireo manamboninahitra niara-nankalaza ity datin’ny faha 12 janoary ity satria dia narevaka sy nirentirenty fatratra ny volomboasary. Ny volomboasary izay iaraha-mahalala fa lokon’ny antoko politika TGV izay naorin’ny filoham-pirenena Malagasy ankehitriny. Misy amin’ireo mpiaradia taminy moa no milaza fa tsy io ilay volomboasary tena lokon’ity antoko ity. Na izany na tsy izany dia azo antoka fa efa tokony nampoizin’ny ankamaroan’ireo tandapa ny ho resabe aterak’iny tranga omaly iny satria voadidin’ny lalana velona eto amin’ny tany sy ny firenena tsy hiandany amina firehana politika na antoko politika izany foloalindahy izany ary “tsy natao hanao politika” ihany koa. Ny zava-nisy anefa dia toy ny nisalotra loko politika ara-bakiteny ny fahitan’ny ankamaroan’ireo mpanara-baovao azy ireo omaly. Efa lasa mersenera fa tsy tandroka aron’ny vozona intsony ve ny foloalindahy, hoy ny fanontaniana mipetraka? Asa indray izay ho fanazavana sy fanamarinana omen’ny filoha iny fihetsika niarahany tamin’ireo heverina ho be tsy miteny na “grande muette” omaly iny fa dia andrasana aloha.